सुश्री थाङ छान चीनका प्रख्यात गायिका हुनुहुन्छ। उहाँले वु हान संगीत अध्ययन संस्थानमा जातीय गायनको शीक्षा हासिल गर्नुभएको थियो। स्नातक भएपछि उहाँ चिनियाँ केन्द्रीय नाट्य-टोलीमा प्रवेश गर्नुभयो। हाल उहाँ एकल गायिका-अभिनेत्री हुनुहुन्छ।
सुश्री थाङ छानले सातौं राष्ट्रिय युवा गायक प्रतियोगितामा श्रेष्ठ गायिकाको पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। पाँचौं चिनियाँ एम.टी.भी. प्रतियोगितामा एउटा विशेष गीत 《सपनालाई साकार तुल्याउनु》का लागि रजत पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो।
सन् 1998 को ग्रीष्म ऋतुमा चीनका केही क्षेत्रमा इतिहासमा विरलै देखिने बाढीको समस्या देखापरेको थियो। सुश्री थाङ छान चीनको केन्द्रीय टेलिभिजनद्वारा आयोजित प्रकोप उद्धार सम्बन्धी रात्री समारोहमा भाग लिनुभएको थियो। यसका अतिरिक्त, उहाँले प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा गई चन्दा दिनुभएको थियो।
सुश्री थाङ छानले चिनियाँ केन्द्रीय नाच-गान टोलीका विभिन्न कार्यक्रममा सक्रियताका साथ भाग लिनुका साथै धेरै पटक ठूलो ढाँचाको रात्री समारोह तथा साझा गतिविधिमा भाग लिनुभएको थियो। उहाँले चीनको केन्द्रीय टेलिभिजनसँगै चीनको ह्वा आन, खुन मिंग, लाह्सा लगायतका क्षेत्रमा गई प्रदर्शन गर्नुभएको छ।
सन् 1999 मा चीनको केन्द्रीय टेलिभिजनद्वारा आयोजित नव वर्षको रात्री समारोहमा सुश्री थाङ छानले चीनका अर्का प्रसिद्ध गायकसँगै एउटा गीत गाउनुभएको थियो। सन् 2000 मा नयाँ शताव्दी उन्मुख रात्री समारोह तथा सन् 2000 को वसन्त चाड रात्री समारोहमा उहाँहरुले फेरी यस गीत गाउनुभएको थियो।
चीनको स्थापना भएको पचासौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सुश्री थाङ छानले चीनका प्रख्यात संगीतकार मंग छिंग युनद्वारा बनाइएको 《मातृ-भूमिको शुभकामना》गाउनुभएको थियो। 《मातृभूमिको शुभकामना》एम.टी.भी. चीनका विभिन्न प्रान्त तथा शहरका टेलिभिजनद्बारा प्रसारित भएपछि ठूलो प्रतिक्रिया जनाइएको थियो। चीनको स्थापना भएको पचासौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा चीनको केन्द्रीय टेलिभिजनले आयोजना गरेको रात्री समारोहमा उहाँले चीनका प्रसिद्ध गायक वु यान चसँगै फेरी यस गीत गाउनुभएको थियो। यसका अतिरिक्त, सुश्री थाङ छानले हु नान, हु पै, च च्यांग, शांगहाई, शान तुंग, च्यांग सि लगायत टेलिभिजनले आयोजना गरेको नयाँ चीनको स्थापनाको पचासौं वार्षिकोत्सव रात्री समारोहमा पनि यस गीत गाउनुभएको थियो।
《मातृ-भूमिको शुभकामना》ले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त गर्नुका साथै चीनको एम.टी.भी. सम्बन्धी स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। सन् 2000 मा सुश्री थाङ छानले चीनका युवा संगीतकार फु खद्वारा सिर्जना गरिएको एम.टि.भी.《सुखको भावना दश हजार वर्षसम्म कायम राख्नु》गाउनुभएको थियो। यस गीतले व्यापक जनताको उच्च मूल्यांकन प्राप्त गरेको थियो। यो गीत गाएपछि सञ्चार माध्यमहरुले सुश्री थाङ छानलाई "नयाँ लोकप्रिय गीतका अग्रस्थानमा रहने गायिका" भनेका थिए। त्यसपछि सुश्री थाङ छानले अर्को गीत 《जन्मस्थल राम्रो छ》गाउनुभएको थियो। यो नयाँ शैलीको लोकप्रिय गीत हो।
संगीत: 《मातृ-भूमिको शुभकामना》